- ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်နေကြတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေကြတဲ့ နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာ မိမိစိတ်တိုင်းကျတဲ့ ယုံကြည် စိတ်ချနိုင်လောက်တဲ့ အားကိုးနိုင်လောက်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိသူကိုသာ ရွေးချယ်တယ်။ ဆရာစားချန်ပြီး ပညာတွေသင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ တပည့်အဖြစ် လက်သပ်မွေးလိုက်တယ်။ လက်သပ် အမွေးခံရတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကသာ ဘယ်ဘက်မှာနေမလဲ? ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလား? မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလား?
(မကောင်းတဲ့ဘက်ကို ရွေးမိရင်တော့ လက်သပ်အမွေးခံပြီး သင်ထားတဲ့ပညာက နောက်ထပ် လူသားတွေကို နှိပ်စက် အနိုင်ကျင့်ဖို့ပဲ ဖြစ်သွားမယ်။)
- မိမိရဲ့ အသိစိတ်ထဲမှာ ရှိသင့်တဲ့စိတ်နဲ့ မရှိသင့်တဲ့စိတ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား ခွဲခြားသိပြီး တည်ဆောက်ထားသင့်တယ်။ ရှိသင့်တဲ့စိတ် ရှိခွင့်နေဖို့အတွက်ကတော့ စိတ်ကိုစောင့်ကြည့် သိမှတ်တဲ့ အသိစိတ်က လိုက်လျောခွင့်ပြုပေးမှာပဲ။ (မရှိသင့်တဲ့စိတ် ဆိုရင်တော့ သတိနဲ့ တားဆီးထားမှာပဲ။)
- လူချစ်လူခင် ပေါများစေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြဿနာမဖြစ်စေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- လောင်စာရှိလို့ လောင်ကျွမ်းတာပဲ။ မိမိစိတ်ထဲမှာ ခံစားမှုလောင်စာတွေရှိနေသမျှ ခံစားမှုအရှိန် အနည်းအများပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လောင်ကျွမ်းနေမှာပဲ။
- အရိပ်မရှိတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးထွားထိုးထောင် တိုးတက်မှုက ထင်ထင်ရှားရှား သိမြင်နိုင်တယ်။ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ ရှိသမျှအရာတွေရဲ့ တိုးတက်မှုကတော့ နှေးကွေးနေတတ်ပါတယ်။ မှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ချည်နှောင် ထိန်းချုပ်မထားပါနဲ့။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ လွတ်လပ်နေတဲ့ စိတ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ဦးဆောင်နေကြတယ်။
- လည်လည်ဝယ်ဝယ်စိတ် ရှိတဲ့သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖြစ်နေတဲ့ တွေးခေါ်မြော်မြင် စဉ်းစားတတ်တဲ့ အသိကို ထပ်ဖြည့်ပြီး အလုပ်တစ်ခု လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားရင် စရိတ်သက်သာပြီး အမြန်ဆုံး ရောက်နိုင်တယ်။ ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရင် ဘယ်လိုစကားမျိုးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောမယ်။ အချိန်ပိုနေသေးရင် နောက်တစ်ကြိမ်လာပြီး လုပ်ဖို့ရှိနိုင်တဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေ အတွက်ပါ တစ်ခါတည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင် စီစဉ်နိုင်ခဲ့ရင် တစ်ချက်ခုတ် ဆယ်ချက်ပြတ်သွားလို့ လည်လည်ဝယ်ဝယ်စိတ်ကို စနစ်တကျ အသုံးချတတ်ဖို့ လိုတယ်။
- ဘယ်အလုပ်ကိုမှ ပီပီပြင်ပြင် ပြီးပြီးစီးစီး မလုပ်ဘဲ ဟိုဟာလုပ်မလိုလို၊ ဒီဟာပဲလုပ်မလိုလိုနဲ့ ဟိုသွားလိုက် ဒီလာလိုက်နဲ့ အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ လှုပ်ရှားမှုတွေသာ များပြနေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- တစ်စုံတစ်ရာကို အာရုံစူးစိုက်နေချိန်မှာ ရုတ်တရက် ကြားလိုက်တဲ့ အသံအရှိန်ကြောင့် ရုတ်တရက်လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ စိတ်ပုံစံ။
- လိုချင်နေတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို တိတိကျကျ မသိရသေးတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အနေအထား။ ပြောမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ပြောချင်နေတဲ့ စကားတစ်ခုကို ပြောခွင့်မရမချင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်။